Amaokwu agbamume: Maka oge ihe isi ike?
Amaokwu nke 13: Maka oge ihe isi ike
Ihe nile dị ndụ nwere ike itinye oge oge ihe isi ike, ma ọ bụ n'ihi ọrịa, nsogbu ezinụlọ ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla ọzọ nwere ike ibilite. N'oge ndị ahụ anyị nwere ike ịtụkwasị ụfọdụ amaokwu ọnọdụ maka oge ihe isi ike Edewo ya n'akwụkwọ-nsọ ​​dị nsọ ka anyị wee mee ha ihe n'oge nsogbu ahụ siri ike.
Site n'ike mmụọ nsọ otu Nna nke Eluigwe sitere n'ike mmụọ nsọ nke jiri igwe na - eme ihe ọ bụla ma na - eje ozi ma na - eso ya, ọ bụ ya mere akụkụ Akwụkwọ Nsọ niile anyị nwere ike ịchọta n'akwụkwọ ahụ dị nsọ nwere ike inyere anyị aka n'ihe niile. oge anyị chọrọ ya.
Enwere ederede n’akwụkwọ nsọ a nke o yiri ka edere ya nke ọma maka anyị, anyị ga-adị njikere ịchọ ha, ọ bụ otu mmụọ nsọ nke Chineke na-eduzi, ga-erute anyị ma nye mkpụrụ obi anyị nkasi obi, ike na ihe niile na anyị kwesịrị inwe ike ihu ọnọdụ anyị na anyị nwere ike ịga n'ihu. Ndị a bụ ụfọdụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ ma ọ bụ amaokwu nke agbamume ka ị nwee ike ịgụ n'oge ihe siri ike.
1 1. Tụkwasị Chineke obi
2 2. Chineke nọnyeere gị
3 3. Akwụsịla ịlụ ọgụ
4 4. Gosiputa na strong siri ike
5 5. Chukwu enyere gị aka n’ihe niile
6 6. Chineke agaghị eleghara gị anya
7 7. Kwere n'Onyenwe anyị
8 8. Kwere ike nke Chineke
9 9. Na-ebi n’udo
10 10. Lụọ ọgụ maka obi ụtọ
11 11. Mee ka ndị ọzọ hụ gị n'anya
12 12. Mee ka obi gị sie ike
13 13. Soro uzo Onyenwe anyi
1. Tụkwasị Chineke obi
1 Ndị Kọrịnt 10:13 ” Onwele onwunwa biara n’aru gi nke umu mmadu na-adighi; ma ikwesị ntụkwasị obi bụ Chineke, onye na-agaghị ekwe ka a nwaa gị gabiga ihe ị pụrụ ịnagide, kama site na ọnwụnwa ga-enyekwa gị ụzọ mgbapụ, ka ị nwee ike iguzogide ya.
Anyi aghaghi inwe ntụkwasị obi na ezi Chineke enyela anyi uzo nke nsogbu a nke anyi n’abia. Ọ maara obi anyị na n’oge ihe isi ike anyị nwere ike ichefu kari na enweghị ike ịmata ụzọ ọpụpụ ọ bụrụgodị na anyị nwere ya n’ihu anyị, nke ahụ bụ oge anyị kwesịrị ịtụkwasị Chineke obi ma nata obere udo ya. na anyị nwere ike ịchọpụta ụzọ mgbapụ ahụ ọ na-enye anyị.
2. Chineke nọnyeere gị
Diuterọnọmi 32: 6 “… Ọ bụghị ya bụ nna gị onye kere gị? Onye kere gi meekwa ka ị guzosie ike.
Ya, Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile, bụ nna anyị ma dịka ọ dị mma ọ na-elekọta anyị mgbe niile. Ọ mara anyị kemgbe anyị nọ n'afọ nne anyị, ọ bụ ya mere o ji bụrụ onye inyeaka kachasị mma anyị nwere, ọkachasị n'oge ndị ahụ mgbe anyị chere na ụwa ọ dịkwara anyị. Ọ bụ nna anyị na onye okike, ọ na-elekọta anyị.
3. Akwụsịla ịlụ ọgụ
Ndị Hibru 11: 32-34 Gịnị ọzọkwa ka m na-ekwu? N’ihi na oge agagh adi mgbe m gwara Gideon, Berak, Samson, Jefta, Devid, ya na Samuel na ndi-amuma; na site n'okwukwe, ha meriri alaeze dị iche iche, ha mere ikpe ziri ezi, ha ruru nkwa, ha kpuchie ọnụ ọdụm, ha mụnyere ọkụ na-enweghị atụ, ha zere mma agha, ha wepụtara ike nke adịghị ike, ha siri ike n'ọgụ, ha gbanarị ndị agha ala ọzọ.
Anyi aghaghi iche na dika ndi ikom Chineke a meriri, anyi onwe anyi g’enweta ya. Ha ezughi oke ma gabiga ọnọdụ ndị siri ike mana ha jupụtara na Chineke ma si otu a nwee ike ịgbake, okwukwe ga-enyere anyị aka inwe udo ọbụlagodi mgbe anyị na-agabiga oke ifufe.
4. Gosiputa na strong siri ike
1 Pita 3:12 “N'ihi na anya abua nke Jehova di n'aru ndi ezi omume, nti ha di nti n'ekpere ha; Ma iru Jehova n againstmegide ndi n evilme ihe ọjọ.
Okwukwe bu ihe n’eduba anyi ikwenye na odi njikere ige nti ekpere anyị niile, ọkachasị ndị anyị na-eme n’oge ihe isi ike. Chineke nuru anyi ma nye anyị ike ya ka anyị we nwe obi ike ma ghara ịda mbà n’oge nsogbu.
5. Chukwu enyere gị aka n’ihe niile
2 Ndị Kọrịnt 4: 7-8 Ma ayi nwere àkù a n'ite urọ, ya mere na ike kachasi ike sitere na Chineke, obughi esite na ayi, onye ihe negbu n’agha n’ihe nile, ma obughi nkpagbu; n'ime nsogbu, mana enweghị nkụda mmụọ. ”
N’ime ederede a anyị hụrụ na mmadụ na-enwekarị nsogbu, mana na Chineke, mkpagbu ndị ahụ anaghị anapụ anyị obi iru ala na ntụkwasị obi na Chineke mana ọ na-egbochi anyị nhụjuanya na enweghị nchekwube niile. Anyi nwere Chukwu n’ime anyi, ike ya n’enye anyi ike n’oge niile.
6. Chineke agaghị eleghara gị anya
Ndị Efesọs 6:10 "Maka nke fọdụrụ, brothersmụnna m, kwụsịnụ onwe unu ike n'ime Onyenwe anyị na ike nke ike ya."
Nke a bụ òkù doro anya iji mee ka onwe anyị na Onyenwe anyị sikwuo ike, nke a ga-abụrịrị mkpa anyị n'etiti ihe isi ike na oge niile. Buru n’uche na Chukwu bu inye anyi ike n’oge anyi choro. Ka anyị ghara ịda mba kama na nzụzọ, ka anyị were ike si n'aka Chineke n'onwe ya gaa n'ihu.
7. Kwere n'Onyenwe anyị
Salmo 9: 10 “Ndị maara aha gị ga-atụkwasị gị obi, +
N'ihi na gị onwe gị, Chineke, ahapụghị ndị na-achọ gị. ”
N’ime ederede a anyị hụrụ na anyị ga-ebu ụzọ chegbuwe onwe anyị banyere ịmara aha dị ike nke Onyenwe anyị, ma ugbu a, ịhapụ ikewapụ onwe anyị na ya. Abụ ọma a bụ nkwa na Chineke n’onwe ya agaghị ahapụ onye na-achọ ya, yabụ ka anyị chọọ Onye-nwe anyị, a ga-echebe anyị mgbe niile.
8. Kwere ike nke Chineke
Ndị Efesọs 3:20 "Ya diri Onye Nke di ike ime ihe nile otutu karie ihe ayi riọrọ ma obu ghota, dika ike nke di n'ime anyi si di."
Obi kwesịrị isi anyị ike na Chineke dị ike, ọbụlagodi maka ihe ndị ahụ anyị chere na ọ nweghị ngwọta. O kwere anyị nkwa na, dịka ike ike ihe niile, ọ ga-akari ịza ihe anyị na-arịọ ọbụlagodi ma anyị ghọtara ya ma ọ bụ na anyị agaghị.
9. Na-ebi n’udo
Maịka 7: 8 “Gi onye iro m, a doụla ọ doụ n'ime m, n'ihi na ọ bụrụgodị na m adaa, m ga-ebili; ọ bụrụgodị na mụ ebiri n’ọchịchịrị, Chineke ga-abụ ìhè m ”.
Nke a bụ ederede na-ekwu maka ọdịnihu anyị, ọ na-agwa anyị na n’agbanyeghi na anyị na - eme ihe ọjọọ, ndị iro anyị na - a rejoiceụrịkwa ọ inụ na nsogbu anyị, Chineke ga - abụ ike anyị ibili, n’ọkụ anyị na mgbe n’etiti ọchịchịrị, na - eso anyị. na-eme ka okporo ụzọ dị ọkụ ka anyị ghara ịsụ ngọngọ.
10. Lụọ ọgụ maka obi ụtọ
Matiu 28:20 “Na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu; ma lee, m nọnyeere gị ụbọchị niile, rue ọgwụgwụ ụwa. Amen. ”
Nke a bụ nkwa. Nwoke ahụ gwara anyị ka anyị debe ihe nkuzi ya niile ma mesie anyị obi ike na ya ga-abụ ndị otu anyị ruo ọgwụgwụ ụwa. N'oge ndị ahụ na-ekpe ekpere ka ike gwụ anyị, obi ike na ọbụnadị okwukwe, cheta na ọ nọnyeere anyị mgbe niile.
11. Mee ka ndị ọzọ hụ gị n'anya
Ndị Hibru 4: 14-16 Ya mere, ebe ayi nwere nnukwu onye nchu aja nke mara n’elu igwe, Jisos Okpara Chineke, ka anyi jigide oru anyi. N’ihi na anyi enweghi onye isi nchu aja nke n’enweghi ike igwa anyi ike n’adighi ike anyi, kama obu onye anwara n’uche n’ihe nile dika udi anyi, ma o dighi mmehie. Ya mere, ka anyị jiri obi ike bịakwute ocheeze amara, inweta ebere na ịchọta amara maka enyemaka ugbu a. ”
Anyi aghaghi icheta na Jisos n’onwe ya oku n’elu uwa a ma taa arua ike n’akpukpo aru anyi, o mara anyi n’etiti ihe anyi nwere ike gabiga ma nwekwa anyi obi ebere. Ka anyị nọrọ ya nso ma nụ ụtọ nlekọta ya na ịhụnanya na-adịgide adịgide na ndụ anyị.
12. Mee ka obi gị sie ike
Nehum 1: 7 “Chineke dị mma, Ọ bụ ike n’ụbọchị ahụhụ; ọ makwaara ndị tụkwasịrị ya obi ”.
Chineke dị mma na nke a bụ ihe anyị mara kemgbe anyị bụ nwata n’ihi na n’ime ụlọ ụka, a na-agwa anyị mgbe niile gbasara Chineke nwere obi ọma, ọ bụ otu mmụọ ahụ na-eme ka anyị guzoro ọbụlagodi n’oge anyị nwere nkụda mmụọ. Ọ bụ onye na-elekọta anyị na onye na-eduzi anyị.
13. Soro uzo Onyenwe anyi
Ediyarade 21: 4 “Chineke ga-ehichapụ anya mmiri niile n'anya ha; ọnwụ agaghị adị, ịkwa ákwá, mkpu ákwá, ihe mgbu; n'ihi na ihe mbu mere. ”
Anyị nwere nkwa na otu onye-nwe ga-ehichapụ anya mmiri anyị ma oge ga-abịa, mgbe ịgaghị enwe oge ịta ụta, onye naanị ya, tọgbọrọ n'efu, adịghị ike ma ọ bụ enweghị obi ike, kama na ọ ga-abụ izu ike anyị. Ka anyị si n’ebe ọ nọ pụọ, ọ ga-elekọta anyị anya wee jupụta gị n'ike ya.
Enwere m olile anya na ị nụrụ amaokwu amaokwu nke Akwụkwọ Nsọ maka oge siri ike.
Gụọ kwa akụkọ a nwa mmefu y Amaokwu 11 nke Akwụkwọ Nsọ banyere ịhụnanya Chineke.
Okpukpe Anglican - Mara Okpukpe a nke ọma
Okpukpe nke Toltec na nkọwa